ဒီဆက်ဆံရေးတွေ ကြားမှာ ကျွန်မပိုပြီး ပင်ပန်းရတယ် – Shinyoon
ဒီဆက်ဆံရေးတွေ ကြားမှာ ကျွန်မပိုပြီး ပင်ပန်းရတယ်
ကျွန်မ ပင်ပန်းနေပါပြီ ….
မမှားပါပဲနဲ့ တောင်းပန်ရခြင်းတွေမှာ ကျွန်မ ပင်ပန်းနေပြီ ။ အဖော်မက်တဲ့ကျွန်မကလေ တစ်ယောက်ယောက် ကိုယ့်အနားက ထွက်သွားမှာ သိပ်ကို ကြောက်တယ် ။ မိတ်ဆွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မိသားစုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျွန်မကို ငြိုငြင်မှာ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေမှာ ကြောက်တယ်လေ ။
ဒါကြောင့်ပဲ မှန်မှန်မှားမှား ငါတောင်းပန်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုပြီး အလျှော့ပေးပါများတော့ ကျွန်မက သူတို့အတွက် ဂရုစိုက်စရာ အလေးထားစရာလို့မပြင်တတ်ကြတော့ဘူး ဘယ်လောက်ပဲ အနိုင်ကျင့်နေပါစေ ကျွန်မ ဒီတိုင်းပဲ ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ ထင်သွားခဲ့တယ်ထင်ပါတယ် ။ အဖော်မက်တဲ့ကျွန်မ ပိုပိုပြီးတော့ အထီးကျန်ရတယ် ပြီးတော့ ဒီဆက်ဆံရေးတွေ ကြားမှာ ကျွန်မပိုပြီး ပင်ပန်းရတယ် ။
ကိုယ့်ကို ချစ်မယ်အထင်နဲ့ ဆွဲခဲ့မိတဲ့ လက်ဟာလဲ ကိုယ်က ချည်းပြန်ချစ်နေရတာတွေနဲ့ပဲ ဆုံးတယ်လေ .. သူက ကိုယ့်ဆိုရှိတယ်လို့တောင် မထင်ပါပဲ ကိုယ့်မှာတော့ နေ့ရှိ ညရှိ စိတ်ပူနေတာကလဲ ဝဋ်ကြွေးပါပဲ … ကိုယ့်ကို ဖေးမမယ်အထင်နဲ့ ခေါင်းငြိမ့်ခဲ့မိတဲ့အဖြစ်ဟာ ကိုယ်ဆင်းမယ့်ငရဲကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မီးထိုးမိတဲ့အဖြစ်ပေါ့ … နောက်တော့ ကျွန်မက ပစ်ထားခံရတယ် …
ပင်ပန်းလွန်းနေပါပြီ … ကိုယ်ဆွဲမှ မြဲမယ့် လက်တွေ ကိုယ် စခေါ်မယ့် အသက်ဝင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေမှာ ကျွန်မ ပင်ပန်းလွန်းနေပါပြီ … ညတွေ ဆို မျက်ရည်တွေနဲ့ အထီးကျန်လွန်းနေပြီ … ဘယ်အချိန်ထိ မြဲမယ်ဆိုတာ မသေချာတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို ကိုယ်က ချည်း အသက်သွင်းနေရတာတွေကို ကျွန်မ ပင်ပန်းနေပြီ ။
တစ်နေ့ကျရင်တော့ ပြတ်ချင်ပြတ်ပါစေတော့ဆိုပြီး ကျွန်မ ထားရစ်ခဲ့မိမှာပါ ။
ကြ်န္မ ပင္ပန္းေနပါျပီ ….
မမွားပါပဲနဲ႔ ေတာင္းပန္ရျခင္းေတြမွာ ကြ်န္မ ပင္ပန္းေနျပီ ။ အေဖာ္မက္တဲ့ကြ်န္မကေလ တစ္ေယာက္ေယာက္ ကုိယ့္အနားက ထြက္သြားမွာ သိပ္ကို ေၾကာက္တယ္ ။ မိတ္ေဆြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္မိသားစုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကြ်န္မကို ျငိဳျငင္မွာ ကြ်န္မ တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ေနမွာ ေၾကာက္တယ္ေလ ။
ဒါေၾကာင့္ပဲ မွန္မွန္မွားမွား ငါေတာင္းပန္လုိက္ရင္ အဆင္ေျပသြားမွာပါဆုိျပီး အေလွ်ာ့ေပးပါမ်ားေတာ့ ကြ်န္မက သူတို့အတြက္ ဂရုစိုက္စရာ အေလးထားစရာလုိ့မျပင္တတ္ၾကေတာ့ဘူး ဘယ္ေလာက္ပဲ အနိုင္က်င့္ေနပါေစ ကြ်န္မ ဒီတုိင္းပဲ ရွိေနလိမ့္မယ္လုိ့ ထင္သြားခဲ့တယ္ထင္ပါတယ္ ။ အေဖာ္မက္တဲ့ကြ်န္မ ပိုပုိျပီးေတာ့ အထီးက်န္ရတယ္ ျပီးေတာ့ ဒီဆက္ဆံေရးေတြ ၾကားမွာ ကြ်န္မပိုျပီး ပင္ပန္းရတယ္ ။
ကိုယ့္ကို ခ်စ္မယ္အထင္နဲ႔ ဆြဲခဲ့မိတဲ့ လက္ဟာလဲ ကိုယ္က ခ်ည္းျပန္ခ်စ္ေနရတာေတြနဲ႔ပဲ ဆံုးတယ္ေလ .. သူက ကိုယ့္ဆုိရွိတယ္လို့ေတာင္ မထင္ပါပဲ ကိုယ့္မွာေတာ့ ေန့ရွိ ညရွိ စိတ္ပူေနတာကလဲ ၀ဋ္ေၾကြးပါပဲ … ကိုယ့္ကို ေဖးမမယ္အထင္နဲ႔ ေခါင္းျငိမ့္ခဲ့မိတဲ့အျဖစ္ဟာ ကိုယ္ဆင္းမယ့္ငရဲကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ မီးထိုးမိတဲ့အျဖစ္ေပါ့ … ေနာက္ေတာ့ ကြ်န္မက ပစ္ထားခံရတယ္ …
ပင္ပန္းလြန္းေနပါျပီ … ကိုယ္ဆြဲမွ ျမဲမယ့္ လက္ေတြ ကိုုယ္ စေခၚမယ့္ အသက္၀င္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြမွာ ကြ်န္မ ပင္ပန္းလြန္းေနပါျပီ … ညေတြ ဆို မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ အထီိးက်န္လြန္းေနျပီ … ဘယ္အခ်ိန္ထိ ျမဲမယ္ဆိုတာ မေသခ်ာတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြကို ကိုယ္က ခ်ည္း အသက္သြင္းေနရတာေတြကို ကြ်န္္မ ပင္ပန္းေနျပီ ။
တစ္ေန့က်ရင္ေတာ့ ျပတ္ခ်င္ျပတ္ပါေစေတာ့ဆုိျပီး ကြ်န္မ ထားရစ္ခဲ့မိမွာပါ ။